१४ वर्षका किशोर अमेरिकाको गर्भनर बन्ने ! « News24 : Premium News Channel
१४ वर्षका किशोर अमेरिकाको गर्भनर बन्ने !
नोभेम्बर र डिसेम्बरमा गभर्नर पदको चुनावका लागि उनी उम्मेरद्वार बनेका छन् । वरमन्टमा चार वर्ष बसेका जुनसुकै उमेरका व्यक्तिले गभर्नर पदका लागि आफ्नो उम्मेद्वारी दिनसक्ने कानूनको फाइदा ईथनले उठाएपछि उनले उम्मेद्वारी दिन पाएका हुन् । ईथन डेमोक्रेटिक पार्टीका हुन् जो अहिले भरमन्टमा निकै लोकप्रिय छन् ।
भरमन्टबाहेक म्याशाच्युशेट्स र कन्सास यस्ता दुई राज्य हुन् जहाँ गभर्नर पदका लागि उमेरको कुनै सिमा निर्धारण गरिएको छैन । त्यसकारण कन्सासमा पनि थुप्रै युवाले गभर्नर पदका लागि आफ्नो उम्मेद्वारी दिएका छन् । यद्यपी, उमेरको हिसाबले इथन सबैभन्दा कान्छा हुन् ।
उनको भाषणमा थुप्रै मानिसहरु सहभागी हुन्छन् । ईथनका अनुसार उनीसँग राज्यको स्वास्थ्य संस्थामा सुधार, आर्थिक र शिक्षाको विकासका लागि थुप्रै योजना छन् ।
उनका एक प्रतिद्वन्द्वी क्रिस्टिन हेलक्विस्ट तेस्रोलिङ्गी हुन् । उनीबाहेक पर्यावरणविद् एथलर र डान्स फेस्टिबलकी कार्यकारी निर्देशक ब्रेन्डा सिगेल पनि उनका प्रतिद्वन्दी हुन् ।
भरमन्टका सबैभन्दा कम उमेरका गर्भनर एफ रे केजर हुन् । सन् १९६१ मा जब उनी गर्भनर बनेका थिए तब उनको उमेर ३२ वर्ष थियो ।
अमेरिकाकै अनुरोधमा शान्ति पुरस्कारका लागि ट्रम्पको नाम सिफारिस गरिएको जापानको भनाइ